‘मिस वल्र्डको अदृष्य ताज जित्न सकें’ - कुराकानी - साप्ताहिक
यो वर्षकी मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले गत शनिबार लन्डनमा सम्पन्न मिस वल्र्ड–२०१९ मा दुई शीर्षक उपाधि जित्न सफल भएकी छिन् । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट १२ सम्म पुग्न सफल अनुष्काले ब्युटी विद अ पर्पोज तथा मल्टिमिडिया एवार्ड जितेकी हुन् । दुईवटा शीर्षक उपाधि जितेपछि अनुष्काले खुसी व्यक्त गर्दै विश्वमञ्चमा नेपाली झन्डा फहराउन सफल भएको बताएकी छिन् । ६९ औं संस्करणको मिस वल्र्ड–२०१९ को उपाधि भने जमैकाकी २३ वर्षीया टोनी एन सिंहले जित्न सफल भइन् । यही मेसोमा उनले प्रतियोगितापछि पहिलो पटक बेलायतको ब्रिस्टोलमा नवीन पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मिस वल्र्डमा दुई एवार्ड जित्दा कस्तो लागिरहेको छ ?
दुई एवार्ड र हेड टु हेड च्यालेन्ज जित्न सफल भएकोमा एकदम खुसी छु र कृतज्ञ पनि । निकै गर्व पनि महसुस भइरहेको छ कि हाम्रो प्रस्तुति यसपालि पनि राम्रो रह्यो भनेर विश्वले याद गरेको छ ।
कत्तिको आत्मविश्वास थियो ?
प्रतिस्पर्धामा जानुअघि मलाई विश्वास के थियो भने आफ्नो मेहनत, टिमको मेहनत र इमान्दारीपूर्वक काम गरेकाले हाम्रो प्रस्तुतिमा कुनै कमी रहनेछैन । र, कमी रहेन जस्तो पनि लाग्छ । विश्वास थियो कि हाम्रो प्रस्तुत निकै राम्रो हुनेछ । नतिजा त निर्णायकको हातमा हुन्छ । तर, आफ्नो तर्फबाट यो ठाउँमा चुक्यौं भन्नेचाहिं हुन दिंदैनौं भन्ने थियो ।
यो एवार्डपछि मिस वल्र्ड आयोजकबाट तपाईंलाई कस्तो सहयोग हुन्छ ?
मिस वल्र्ड भनेको यस्तो ब्रान्ड हो कि उसले रिकग्नाइज गरेर मान–सम्मान दिइसकेपछि विश्वको आँखा नेपाल पुगेको छ । यसले हाम्रो सोल्सिङ प्रोजेक्टलाई अझ ठूलो रूपमा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने अपेक्षा छ । हाम्रो हेलम्बुको कम्युनिटी प्रोजेक्ट सबलीकरण परियोजना हो । हामीले परियोजनामार्फत आय आर्जनका स्रोतको बाटो खोलेका छौं । गलौंचा मैनबत्तीजस्ता उत्पादन गरेका छौं । अब बजार विस्तार हुनेमा आशावादी छु ।
अब नेपालले मिस वल्र्ड जित्ने दिन कहिले आउला ?
हरेक वर्ष नेपालले उत्कृष्ट पर्फमेन्स दिंदादिंदै किन टप ५ मा पुगेन भनेर प्रश्न आउँछ ? मेरो आफ्नो पनि यही प्रश्न छ । पहिला हामी जजहरूबाट स्कोर सिट पाउँथ्यौं तर अहिले स्कोरसिट दिइन्न वा पारदर्शी देखिन्न । केको आधार र क्राइटेरियाले टप ५ छानिदिनुभयो भन्ने थाहा हुँदो हो त आफ्नो तयारी अझ राम्रोसँग गर्न सक्थ्यौं । साँच्ची भन्ने हो भने आफ्नो देशका रूपमा, व्यक्ति र टिमका रूपमा राम्रो प्रस्तुति दियौं जस्तो लाग्छ । यदि हामीलाई यो विधामा राम्रो गर्नु भनेर टिप्पणी वा फिडब्याक आउने हो भने झन् बढी गर्न सक्थ्यौं । ताज जित्ने दिन आउँछ तर आफ्नोतर्फबाट गर्व हुने गरी प्रस्तुति दिनचाहिं छाड्नु हुन्न । तर मानिसहरूले यसरी पनि भाग लिन जानु राम्रो हो त भन्नुहुन्छ । म भन्छु, हरेक वर्ष जानु नै पर्छ । किनभने ताज त एउटा पाटो हो, तर अदृश्य ताज लिएर हामी बर्सेनि फर्कन्छौं । मिस वल्र्ड महोत्सव सुरु भएपछि हामीले जातीय कुरा, रूपको कुरा गरेनौं । बरु नेपाल र विश्वभरका सबैले यसलाई सकारात्मक रूपले हेर्‍यौं । त्यसकारण एकता र सकारात्मक सोचवृद्धिका लागि मिस वल्र्ड एउटा बहाना हुन सक्छ र सधैं जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
इभेन्टको अनुभव कस्तो रह्यो ?
निकै रमाइलो, राम्रो र धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । २१ दिनसम्म १ सय २५ देशका प्रतिनिधिसँग बिहान ६ बजेदेखि १२ घण्टासम्म सँगै काम गथ्र्याैं । रिहर्सल गथ्र्यौं, खान्थ्यौं, हांस्थ्यौं । एक–अर्काको देश, रहनसहन, संस्कृतिका बारेमा कुरा गथ्र्यौं । यसले व्यक्तिगत नाता मात्र गाँसिएन, देशका रूपमा पनि नाता गांस्न पुग्यौं । सहभागी प्रतिस्पर्धी र आयोजकहरूले फर्कंदा आएको भन्दा धेरै कुरा सिकेर अझ प्रोत्साहित व्यक्ति बनेर फर्कियौं जस्तो लाग्छ । सामाजिक सञ्जालमा हामीले मानसिक स्वास्थ्यबारे १० मिनेटको भिडियो राखेका थियौं, धेरै युवायुवती प्रभावित भए । हामी प्रतिस्पर्धीहरूले मेन्टल हेल्थका बारेमा खुलेर बोल्यौं । मैले आफ्नो कथा सुनाएँ, अरू प्रतिस्पर्धीको पनि कथा सुनें । मलाई घत लागेको कुरा के भने घरेलु र महिला हिंसा हाम्रो समाजमा मात्र हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, तर विकसित देशमा पनि हुने रहेछ । के कारणले ती देशमा हुने रहेछ र हाम्रोमा के कारणले भइरहेछ भन्नेबारे धेरै कुरा आदान–प्रदान भयो । सबैभन्दा मनमा लागेको कुरा, यौन हिंसाको । सहभागी कति त आफैं पनि यौंन हिंसाका पीडित रहेछन् । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो मुद्दामा सहकार्य गर्नेबारे पनि कुराकानी भयो ।
तपाईंले प्रशिक्षण अवधिभर आफ्ना प्रतिस्पर्धी साथीहरूमाझ नेपाललाई कुन हिसाबले चिनाउनुभयो ?
नेपाल सुन्दर र विविधताको देश भनेर धेरैले चिन्नुभयो । हामीले परिचय भिडियोमा पनि हिमाल, पहाड, तराई दर्साएका थियौं । साथीहरू नेपाल कता छ भनेर सोध्थे । मैले नेपालको व्याख्या गरिदिंदा सबै जना प्रभावित भए । हाम्रो पृथक् झन्डा छ, कुमारी छन् र भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि मौसम, खानेकुरा, संस्कृति र वेशभूषामा विविधता छ भन्ने सुनेर उनीहरू अचम्म मान्थे । एकपटक नेपाल जानैपर्छ भन्ने फिल उनीहरूमा भएको छ । मैले नेपाल भ्रमण वर्षको प्रवद्र्धन मात्र गरिनँ, नेपाल ठाउँ होइन, अनुभव हो । हिमाल हेर्न होइन, महसुस गर्न जाने देश हो नेपाल भनेर व्याख्या पनि गरें ।
ग्रान्ड फिनालेमा हलभित्र तपाईंका शुभचिन्तक नेपालीहरूको भीड देख्दा कस्तो लाग्यो ?
एकदम गद्गद् भएँ । हरेक रोमा बसेका नेपालीसँग युनिक झन्डा देखेर आत्मविश्वास बढ्यो । अधिकांशले नेपालको झण्डा हल्लाएर हौसला दिँदा हुटिङ गरेको देखेर थप शक्ति, ऊर्जा आइरहेको महसुस भयो ।
‘स्टेजमा उत्रँदा ‘नर्भसनेस’ महसुस भएन ?
देशको आशा बोकेर हिंडेको छु भन्ने सोच्दा डर लाग्दो रहेछ । परिचय राउन्डमा २० सेकेन्डभित्र आफ्नो देशको पहिचान दर्साउनुपर्ने थियो । मैले थारु संगीत र नाच प्रस्तुत गरें । इभेन्ट प्रशिक्षणभर पनि मैले हरेक सेग्मेन्टमा नेपालको विभिन्न भाग र वेशभूषा देखाउने प्रयत्न गरें । पहिरनमा पहिचान भन्ने मूलमन्त्रसहित फिनाले गाउन मैले हातले बुनेको नेपाली ढाकाको लगाएको थिएँ । महिला सबलीकरण कार्यक्रमबाट उत्पादित थियो उक्त ढाका ।
प्रकाशित :पुस ७, २०७६
मिस वल्र्ड टोनीको अन्नपुर्णको कार्यक्रममा जे देखियो (फोटोफिचर)
मिस वर्ल्ड टोनी नेपालमा
हाँस्नभन्दा हँसाउनै सजिलो चैत्र ७, २०७६
‘अरुको माया पाएँ, आफ्नाको गुमाएँ’ फाल्गुन ३०, २०७६
पुरुष अस्थायी साधनको विकल्प भएन फाल्गुन २८, २०७६
आवश्यकता अनुसार ड्रोन बनाउँछौं फाल्गुन १७, २०७६